Momba anay - XGEAR
Tanjona ny ho lasa mpanavao sy ny fanatanjahan-tena sy ivelany fitaovana ambony marika.
Be atao loatra amin'ny fiomanana amin'ny fiainana, fa tsy miaina mihitsy?Mandrosoa izao!
Fitaovam-panatanjahantena sy fanatanjahan-tena, karazana fanatanjahantena rano, fitaovana anatiny sy ivelany, XGEAR dia manana izay rehetra irinao.
Mifantoka amin'ny traikefa manontolo ary sahy mamakivaky, XGEAR dia vonona hatrany hikaroka ny tsy fantatra ary hanaiky fanamby.Mamolavola, mamolavola, mamokatra ary manao dokam-barotra momba ny fanatanjahan-tena vaovao sy manavao sy fitaovana ivelany izahay, ary manolo-tena amin'ny fampiroboroboana ny fiainana mahafinaritra sy feno fanantenana.
Isaky ny miandany amin'ny maro an'isa ianao, dia izao no fotoana hiatoana sy hisaintsainana.Mandehana mitady fitaovana mety amin'ny XGEAR, ary sokafy ny tontolonao amin'ny fahafahana vaovao.
Ny XGEAR dia marika mitombo haingana, manome serivisy mpanjifa rehetra izahay ao anatin'izany ny fividianana vondrona vondrom-piarahamonina, influencer media sosialy, mpitarika ny hevitra fototra, E-varotra, varotra, OEM, fizarana ary mpivarotra.Tonga tany Amerika, Eoropa, Japon, Aostralia ary manerana izao tontolo izao ny vokatray.Miaraha miasa aminay, ary afaka manampy ny orinasanao izahay.
Trano fitehirizam-bokatra roa any Etazonia, ny iray dia Los Angeles, ary ny iray any Wisconsin, fitahirizana tsy misy kilema izay manome vahaolana amin'ny fanatobiana entana sy lozisialy, ka samy misy ny fanafarana mivantana sy ny sambo an-trano, izay manome fahafaham-po ny mpanjifantsika.
Ekipa mahomby manolotra fonosana amin'ny vidiny mifaninana, ahitana ny vokatra be dia be, fizarana fampahalalana momba ny varotra, fanohanana fanolorana sy famerenana, famolavolana sy fanavaozana ny vokatra, famaritana vokatra kalitao, fanohanana fonosana, fanohanana varotra, ekipa serivisy mpanjifa, fanatobiana entana, famonosana ary vahaolana lozisialy, voatokana ekipan'ny fandefasana entana natsangana mba hihodina haingana indrindra amin'ny fotoana mamaly ny olana sy ny fotoana rehetra.
Miaraka amin'ny rafitra Oracle NetSuite, ECCANG ERP ary nanao fifanarahana tamin'ny varotra SPS.Nampiasa ny teknolojia sy ny fitantanana farany ny rafitra sy ny fizotranay mandroso ary mahafantatra ny fomba hamindra haingana ny vokatrao sy amin'ny vidiny mora.